WAKIIL / OEM / ODM - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Dharbaaxo Neon jilicsan
Siidaynta Dhinac Keliya
Raadinta Labada Dhinac
Oggolaanshaha Darajada 360
Xadhiga 1aad ee Xarig la’aan
Xadgudubyada Jiilka 2aad
Xadgudubyada Led-dabacsan (IP20)
Xadgudubyada Neon ee jilicsan (IP65)
WAKAALKA / OEM / ODM
Waxaan si isdaba-joog ah u cusbooneysiineynaa iyadoo ku saleysan dalabaadka macaamiisha, waxaan dhidibnay booska hoggaamineed ee cilmi baarista, horumarinta, injineernimada, iyo suuqgeynta xalka nalalka ku saleysan LED-ka. Ku tiirsanow faa iidooyinka ballaaran ee baaritaanka nalalka LED, horumarka, injineernimada, iyo suuqgeynta, Abestis wuxuu noqonayaa hormood caawiye LED Lighting. Waqtigan xaadirka ah, badeecadeenna iyo xalalkeenna ayaa durba lagu dabaqay daraasiin waddamo ah iyo dad ku nool adduunka oo dhan.
Cutubka Koowaad: Wakiilka Badeecadeena
Waxaan si isdaba-joog ah u cusbooneysiineynaa dalabaadka macaamiisha, waxaan aasaasnay ​​hoggaanka warshadaha ee afar qaybood oo waaweyn: adeegyada aasaasiga ah ee amniga, qaybaha iyo nidaamyada, adeegga xirfadlaha iyo termina
Cutubka Labaad: Adeegga ODM
Mararka qaarkood waa inaad ka fekertaa banaanka sanduuqa, sida ku cad codsiyada badan ee aan fulinay ee xalalka nalalka cusub ee gaarka ah. Joineonlux Strip light waa soo saaraha aaladda asalka ah, karti ayaan u leenahay oo waxaan rajeyneynaa inaan iskaashi la yeelano adiga.
Goynta Edge Technology
Macaamiishayada OE / OES waxay marin u leeyihiin koox tayo sare leh oo injineero ah. Qeybtayada R&D ee goobta waxay si firfircoon u raadineysaa una qiimeyneysaa horumarka ugu dambeeyay ee teknolojiyada LED-ka ee mashruucaaga.
Cutubka Labaad: Adeegga OEM
Ma jiro hal-cabbir-ku-habboon oo dhan LED xal. Waxaan awood u leenahay inaan kula jaanqaadno howlahayaga isla markaana aan u habeynno wax soo saarkeena - ama aan kuu dhisno mid cusub - faahfaahintaada saxda ah.
Silsilad awood leh
Silsiladdeena sahaydu waa laf-dhabarka ganacsigeenna OEM. Adoo ku xoojinaya howlaha hal saqaf hoostiisa, Joineonlux LED light light waxay siisaa daahfurnaan, tayo, iyo qiimo macaamiishayada OE iyo OES.
Abest Laydhka Ruuxu waa "ilaali balanta oo isku day sida ugu fiican"! Dhaqan Abest oo ku xididaystay qalbiga shaqaalaha Abest, waxayna siisaa firfircooni Abest horumar waara.
Gali cinwaanka emailkaaga si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee wararka iyo Birta.